Kitra-Mondial 2018: Hahazo 128 934 000 000 Ariary ny ekipa tompondaka
lundi, 18 juin 2018 08:35
Tsy hisy hody maina tanam-polo ireo mpilalao mandray anjara amin’ity fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra tanterahina any Rosia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018 ity, fa hotoloran’ny Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra (FIFA) vola avokoa.
Ankoatra izay fampanantenana ataon’ny firenena fiavian’ireo ekipa miisa 32 mandray anjara, dia hahazo 128 934 000 000 Ariary (38 000 000 dolara) avy amin’ny FIFA ny ekipa tafavoaka mpandresy ka handrombaka ny amboara amin’ny 15 jolay 2018. Hahazo 95 004 000 000 Ariary (28 000 000 dolara) kosa ny ekipa resy amin’ny famaranana.
81 432 000 000 Ariary (24 000 000 dolara) ho an’ny ekipa laharana fahatelo, raha toa ka 74 646 000 000 Ariary (22 000 000 dolara) ho an’ny ekipa fahaefatra.
Samy hahazo 54 288 000 000 Ariary (16 000 000 dolara) kosa ho an’ireo ekipa rehetra nihintsana teo amin’ny ampahefa-dalana). Samy hahazo 40 716 000 000 Ariary (12 000 000 dolara) kosa ho an’ireo ekipam-pirenena tonga teo amin’ny ampahavalon-dalana.
Samy homena 27 144 000 000 Ariary (8 000 000 dolara) kosa ireo ekipa tsy nandingana ny fihodinana voalohany na tsy tafavoaka tamin’ny fifanintsanam-bondrona amin’ity Mondial 2018 any Rosia ity.